ဘိုးအင်း 787-8 Dreamliner DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 81.5 ကို MB
downloads ရယူရန္ 149 093
Rikoooo အားဖြင့် Assambled TDS, Alejandro Rojas Lucena,
အဘို့အ Dreamliner ၏အရောင်အဆင်းလှဘိုးအင်း 787-800 FSX & P3D utility ကိုမြေပြင် (ဘတ်စ်ကား, ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး, လှေကား, refueling, Animation) နဲ့ (Tenkuu Developpers Studio ကမော်ဒယ်), ပြည့်စုံအထုပ်, က virtual cockpit နှစ်ဦးစလုံး cockpit အလုံအလောက်အနီးကပ်ဖြစ်ကြောင်း, Alejandro Rojas Lucena ထံမှ 737 အဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ VC ကိုတစ်ဦးမိုဃ်းကိုရွာစေအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ (ညာဘက်ခလုတ်ကိုအပေါ်နှိပ်ပါ) Wiper ကာတွန်းကားဖြစ်ပါတယ်။ LCD ကို, EICAS, PFD, MFT, Autobrake, ပွင့်လင်းလေယာဉ်မှူးပြတင်းပေါက်များအတွက် switches ။ အလင်းသည် switches များအခန်း, FMC အတိုငျး, Proximity သတိပေးစနစ် (GPWS), VC ကိုညဉ့်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျ။ ထည့်သွင်းထုံးစံအသံ။ အမျိုးမျိုးသောအပိုဆောင်း functions တွေနှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များများအတွက် pack ကိုအားအထောက်အပံ့စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ပါ။
လည်းမိမိအအမည်ပြောင် Dreamliner များကသိကြတဲ့ဘိုးအင်း 787, တစ်ဦးရှည်လျားသော-ခရီးရှည်သွားလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်မေလ 26 အတွက်ဝနှင့်အတူ 2004 ခုနှစ်ဧပြီလ 2008 အပေါ်စတင်ကသူသည်သူ၏ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်သည်ဒီဇင်ဘာလ 15 လုပ် 2009 နှင့်သြဂုတ်လ 26, 2011 အပေါ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ပထမဦးဆုံးပေးပို့ All Nippon Airways ကမှရာအရပျစက်တင်ဘာလ 26, 2011 ကိုယူ။
ဒီလေယာဉ်ပျံပုံစံနှင့် configuration ပေါ် မူတည်. 210 နှင့် 330 ခရီးသည်အကြားသယ်ဆောင်နှင့်ထို့ထက် ပို. လောင်စာအကျိုးရှိစွာသည်: ဘိုးအင်း၏မူလသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ, တစ်ဦးအနိမ့်စားသုံးမှု 20% ကအဲယားဘတ်စ် A330 သို့မဟုတ်ဘိုးအင်း 777 ၏ရန်။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
Author: Rikoooo အားဖြင့် Assambled TDS, Alejandro Rojas Lucena,